အမှတ်မထင် လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နှလုံးသားအပိုင်းအစများ စုစည်းရာ: 2008
ယုံကြည်စွာ ဖမ်းဆုပ်လိုက်တာက မရှိခြင်း
မာယာနဲ့ ရွေ့လျား ပင်လယ်ဆီပြန်အသွားမှာ
ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေးပါ။ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ ရင်ခတ်နွယ် ဆိုတဲ့ ဘလောစ့်ဂါတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ပေးခဲ့တဲ့ ခံစားချက်လေးတွေပေါ့။ကျွန်တော်အတိတ်ရဲ့ အရိပ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး ကျွန်တော်တစ်ချိန်က ပြင်ပြင်းထန်ထန်ခံစားနေတာကို ကျွန်တော်ညီလေး
မြစ်ကောက်က မြင်ပြီး ဒီကဗျာလေးကို ချက်ချင်းကျွန်တော်အတွက် ထရေးပေးခဲ့တာပါ။ကဗျာလေးက ကောင်းသလောက် အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်အတိတ်ရဲ့ အရိပ်ကို ဒီကဗျာလေးနဲ့ ဖွင့်ကြည့်ပေါ့။အကြောင်းအရာ တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန် ဒီကဗျာလေးကို အားလုံးပဲပြန်လည်ခံစားနိုင်အောင် ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးတာပါ ကဗျာကိုဖတ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာပေးနိုင်ပါတယ်။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 10:06 PM 1 comment:
ကျွန်တော်ရဲ့ ရင်ထဲက အပိုင်းအစတစ်ခု
ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်မနက်လုံး တိတ်ဆိတ်နေတယ်
မိုးရွာသောကြောင့် အားလုးံလန်းဆန်းနေပေမယ့် ကျွန်တော်တစ်ယောက် ထိုင်ရင်းအိပ်ငိုက်နေတယ်။မိုးရွာသောကြောင့် စားသောက်သူ ဖောက်သည်များ မလာသဖြင့် ကျွန်တော်အလုပ်မရှိပါ ထိုင်နေရတာကြာလာသောအခါ အလွန်အိပ်ချင်လာသည်။အိပ်ချင်ပြေပျောက်ရန် စတိုးဆိုင်တွင် ဆားငံသီးသွားဝယ်ရင်း အိပ်ချင်ပြေ လမ်းထွက်လျောက်လာခဲ့သည်။
ဆိုင်မှအထွက် ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နှင့် သုံးဆိုင်ကျော် silver stone ကားတာယာပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး ဆိုင်တွင် အသက် ၇ နှစ်ခန်းတ၇ုတ်ကလေးလေးတစ်ယောက်သည်၊ကားဘီးဖြူတ်ရန် ချိုင့်(ကားဘီးဖြုတ်ရာတွင် ကားကိုထောက်သောပစ္စည်း) အကြီးစားကြီးကို မနိုင်မနင်း နှိပ်၍ ချိုင့်ထောက်နေသည်ကို ကျွန်တော် ကြည့်ရင်း ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးချင်စိတ်ဝင်ခဲ့ပါသည်၊အရင်ကတည်းက ဒီလိုခံစားချက်မျိုး ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်မှာကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ရေးသင့်မရေးသင့် စဉ်းစားရင်းနှင့် ကျွန်တော် အခုရေးမည့် အကြောင်းကိုမရေးဖြစ်ခဲ့ပါ၊အမှားပါမှာလည်းကြောက်သည်။
အခုတော့ ရေးချင်စိတ်ကိုမထိမ်းသိမ်းနိုင်တော့ပါ မှားရင်လည်းမှားသမျှကို ကျွန်တော် ခံပါမည်၊၀ိုင်း၍ဆော်မယ် ဆိုလည်း ဆော်ကြပါ၊လှော်မယ်ဆိုလည်း အလှော်ခံဖို့အသင့်ပါ။
ကားဘီးဖြုတ်ရာတွင်လုပ်နေသော တရုတ်ကလေးလေးသည် အလုပ်သမားမဟုတ်ပါ တာယာဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သူဌေးသားအရင်းလည်းဖြစ်သည်။
တစ်ကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သားသမီးဆိုရင် ဒီလိုခိုင်းမလား...?
ဒီမေးခွန်းလေး ကျွန်တော် အရင်မေးကြည့်ချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုဟာ ကျွန်တော်မိဘ အပါအ၀င် မိဘတိုင်းက သားသမီးများကိုချစ်ကြပါသည်၊ ကျွန်တော်တို့ သားသမီးသာ ဒီတရုတ်ကလေးနေရာမှာဆိုရင် .....သားရေ သွားမလုပ်နဲ့ ချိုင့်ပြုတ်ရင် အန္တရယ်ရှိတယ် နောက်ဆုတ်နေ၊မလုပ်နဲ့နော် ခါးနာလိမ့်မယ် အိပ်ပေါ်တက်နေ ...ဒီလို အများအားဖြင့် ပြောကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အများစုကိုပြောတာပါ လူတိုင်းမိဘတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော် တစ်ကယ်ပြောချင်တဲ့ အရာက ဒီတရုတ်ကလေးလေး အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာကို ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဘာဖြစ်လို့တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လူချမ်းသာ မျိုးနွယ်စုအဖြစ်နေရာယူနိုင်ကြတာလည်း...?အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးမှာ တရုတ်လူမျုိုးတွေဟာ လုပ်ငန်းကြီးတွေ၊ စီးပွားရေးတွေ တော်တော်များများကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ သူတို့တွေ ချမ်းသာရတာလည်း...? တန်ခိုးတွေရှိလို့လား...?ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ် ဒါတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး...။
ဒါဆို တစ်ခြားလျို့ဝှက်ချက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် ၊ ဒါမှမဟုတ်အဆောင်ကောင်းတွေဂှိနေလို့လား...?
တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲသားများကြတာလည်း...?
တစ်ရုတ်တွေကတစ်နေ့တစ်ခြား မြို့လယ်ခေါင်တွေမှာ တိုက်ခန်းတွေ ပိုင်ဆိုင်လာသလို၊ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက မြို့လယ်ခေါင်အိမ်နေရာကို ရောင်းပြီ မြို့သစ်များသို့ဦးတည်နေကြတယ် ၊ မြေကွက်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာ ကြိုက်ကြလို့လား၊ မဟုတ်ပါဘူး သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေတဲ့ မြို့လယ်ခေါင်ကနေ ခရီးသွားရတာ ခက်ခဲတဲ့ မြို့သစ်တွေကို ဘယ်သူပြောင်းချင်ပါ့မလည်း၊စီးပွားရေး အဆင်မပြေတော့ မြို့လည်ခေါင်က ဈေးကောင်းရတဲ့နေရာလေးကိုရောင်းချပြီး ဈေးချုိုတဲ့ မြို့သစ်တွေဆီ ပြောင်းကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ပါ ကျွန်တော်အရမ်းချစ်သော ကျွန်တော်ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ဒီလိုနဲ့အကုန်ခွဲခွာသွားရတာပါ။
တစ်ကယ်တော့ တရုတ်လူမျိုးတွေ နိူင်ငံတိုင်းမှာ နေရာယူနိုင်တာက တန်ခိုးရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ အလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ် ၊ အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးစီးပွားရှာတဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါ၊သူတို့တွေတစ်နေကုန်တစ်နေခန်း စီးပွားရှာကြပါတယ် သူတို့နားနေချိန်ဆိုတာ အလွန်ရှားပါတယ်။
သားသမီးတွေကို လမ်းကြောင်းချပေးတာလည်းတော်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များများဟာတရုတ်တွေပါ ကျွန်တော် ၉ တန်းအောင်တော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း တရုတ် ၂ ယောက်စလုံး စာမေးပွဲကြပါတယ် သူတို့တွေကိုယ်တိုင်လည်း စာကိုစိတ်မ၀င်စားကြပါ။စာမေးပွဲကျတဲ့နှစ်မှာပဲ သူတို့ကို မိဘတွေကကျောင်းထုတ်လိုက်ကြပါတယ် ။
သူတို့က ကျွန်တော်ရဲ့အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါ သူတို့မိဘတွေကို ကျွန်တော်စိတ်အတော်ဆိုးပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်က ကျောင်းထုတ်တဲ့ ကိစ္စနှင့် သူ့တို့မိဘတွေကို ကျွန်တော်စကားမပြောပါ။သူတို့ကိုကျောင်းထုတ်၍ မိဘတွေက တစ်ယောက်ကို အိမ်က ကားလုပ်ငန်းတွင် ကားစပယ်ယာလိုက်ခိုင်းပါသည်၊တစ်ယောက်က သူ့အဖေ သံအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွင် ခိုင်းပါတော့သည်။ကျွန်တော်မိဘတွေဆိုရင် ဒီလိုခိုင်းမည်မဟုတ်ပါ သားရေ တစ်နှစ်စာထပ်ကြိုးစား ကျောင်းပြန်တက် ပညာတတ်ကြီးဖြစ်မှ သက်တောင့်သက်သာ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာ ကျောင်းပြန်တတ်နော်...အဲ့လိုပြောမှာအမှန်ပါ။ကျွန်တော်မိဘတွေ ကျွန်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ်နှင့်ပြောတာဖြစ်ပါသည်။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းရဲ့မိဘတွေဟာ သူ့သားတွေပညာရေးကိုစိတ်မ၀င်စားတာ သိကြပါတယ်၊ ပညာရေးကိုစိတ်မ၀င်စားပဲ ကျောင်းတက်နေရင် အချိန်ကုန်မှာစိုးလို့ အိမ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အခြေခံကစပြီး ပုံစံချပေးခဲ့တာပါ သူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် သားသမီးတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတွက်ပြီးလုပ်စေခဲ့တာပါ အခုချိန် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးနေရာကြ တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်နေကြပါပြီ။အတန်းပညာ မတတ်လည်းဘ၀ကို သက်တောင့်သက်သာဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ ပညာတွေ လောကကြီးမှာ သင်ယူလို့မကုန်နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်အဖွား ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အမြဲပြောပြတဲ့ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ပုံပြင်လေး တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ် ဟိုးတုန်းက မြစ်ဝကျွန်းပေါ် မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အတီးဆိုတဲ့ တရုတ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် အတီးကအတော်လေးဆင်းရဲပါတယ် ၀က်လေးတစ်ကောင်နှစ်ကောင်လောက်မွေးထားပါတယ် သူရဲ့ဝက်တွေအတွက် ၀က်စာကို အိမ်တွေမှာ ၀က်စာပုံးထားပြီးလိုက်သိမ်းပါတယ် ၊ အတီးအမြဲဝတ်တဲ့အကျီ င်္က စွတ်ကျယ်လပ်ပြတ်လေးပါ ဘောင်းဘီတိုကလည်းအစုတ်အပြတ်ပါပဲ တော်တော်နဲ့လည်း ဒီအ၀တ်အစား ယူနီဖောင်းကိုမလဲပါဘူး ဒါဝတ်ဒါချွတ်ပဲ လုပ်ပါတယ် တစ်နေ့လာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ လူတွေက အတီးကို မြင်တိုင်း ပြောကြပါတယ် အတီးအ၀တ်အစားအကောင်းလေးတော့ ၀ယ်ဝတ်သင့်တယ် နေ့တိုင်းလည်း ဒီစွတ်ကျယ်လက်ပြတ်နဲ့ဒီဘောင်းပြီပဲ မင်းသေရင်မင်းနောက်မပါပါဘူး၊ အဲ့လိုလူတွေ ပြောတိုင်းအတီက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့"၀"..ကပြည်ကြီးကနေစီးပွားလာရှာတာလေ မ၀တ်နိုင်သေးလို့ပေါ့ "၀"..၀တ်နိုင်တဲ့ အချိန်ကြရင် ၀တ်မှာပါ အခုတော့ အချိန်မကျသေးလို့ပါ။
ဒါနဲ့လူတွေက အတီးကို ဒါဝတ်ဒါချွတ်လို့ ခေါ်ကြတယ် စကြနောက်ကျတယ် ...။လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော အတီးကအပြုံးမပျက်ပါဘူး စွတ်ကျယ်လက်ပြတ် အစုတ်ကြီးကို ၀တ်မြဲတိုင်းဝတ်ပါတယ၊ ဒီလိုနဲ့ အတီးဟာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ အလုပ်ကြိုးစားပြီး ချမ်းသာတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်သွားပါတယ် ။ သူတို့မြို့လေးမှာ အတီးပိုင်လယ်ယာတွေကို လက်ညှိးထိုးလို့မလွဲ ပါဘူး အရင်က အတီးကို ဒါဝတ်ဒါချွတ်လို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ အတီးဆီမှာ လယ်ယာတွေကို ပေါင်ရတဲ့ အခါ ။အတီးက မင်းတို့ "၀" ကိုမှတ်မိလား...? အရင်ကမင်းတို့ "၀" ကို ဒါဝတ်ဒါချွတ်လို့ ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လေ "၀" ဒါဝတ်ဒါချွတ်လို့ပဲ ဒီဘ၀ကိုရောက်တာ အခု "၀" မင်းတို့ထက် သာအောင်ဝတ်နိုင်ပြီလေ ၊အခု "၀" ၀တ်ချင်တာဝတ်လို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ အတီးဟာ လုံလောက်တဲ့ ၀င်ငွေမရနိုင်သေးလို့ မသုံးခဲ့တာပါ သူ့မှာ ခိုင်မာတဲ့ စီးပွားရေးရှိတဲ့အချိန် သူ့သုံးငွေဟာ သူ့ဝင်ငွေကို မထိခိုက်နိုင်လောက်အောင် ချမ်းသာတဲ့ အချိန်ကြမှ သုံးခဲ့တာပါ..။
ကျွန်တော် သူဋ္ဌေးလင်မယားမှာ အသုံးအစွဲ အလွန်စီစစ်ပါသည် ဆိုင်ထဲမှ ၀င်ငွေကို အပြင်အတွက်မသုံးစွဲပါ ပိုက်ဆံအိတ် နှစ်အိတ်ထားပါသည် အပြင်သုံးရန်တစ်အိတ် ဆိုင်အတွက်သုံးရန်တစ်အိတ် ထားပါသည်။ဆိုင်အတွက် တစ်ကျပ်ဖိုး ပစ္စည်းဝယ်ပါစေ ဘောင်ချာ(ငွေစာရင်း)တောင်းပါသည်၊တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်ကိုဆိုင်အတွက် အသေးသုံး ပစ္စည်းလေးတွေ ၀ယ်ခိုင်းပါသည်။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမ၀ယ်ပါ သူဋ္ဌေးနှင့်အမြဲရန်ဖြစ်ပါသည် တစ်ကျပ်ဖိုးဝယ်လည် ဘောင်ချာတောင်းခိုင်းလို့ပါ ကျွန်တော်မတောင်းချင်ပါ။ စားတာသောက်တာကအစ ဘောင်ချာထားပါသည် သူတို့လင်မယားတစ်နေ့ ထမင်းစားစရိတ် တစ်ဆယ်သတ်မှတ်ထားရင် ၁၀ ဖိုးလောက်အောင်သုံးပါသည်။
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် ညဖက် အပြင်ဆိုင်မှာ ထမင်းစားနေရင်း သူတို့လင်မယားထမင်းစားခိုက်နှင့်ဆုံပါသည် သူ့မိန်းမ မိုင်လို(Milo)သောက်ချင်သဖြင့် သူတို့ယူလာသောငွေ မလောက်သဖြင့် ကျွန်တော်ဆီက ပြန်ချေးပါသည်။အဲ့ဒီတော့မှ သူတို့လင်မယားတစ်နေ့တစ်ဆယ်သုံးမှန်း ကျွန်တော်သိရပါသည်။ကျွန်တော်အသုံးစရိတ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်စရိတ်ထက်များနေမှန်း အခုမှသိရပါသည်။ဘယ်လောက်ထိစေ့စပ်လည်းဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေ အော်ဒါမှားချက်မိသည့်အခါ ဟင်းပွဲများမှားတတ်ပါသည် ထိုဟင်းပွဲမှာ ပြန်ရောင်းရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ လွှင့်ပစ်ရင်ပစ် မပစ်လျင် ကိုယ်တိုင်စားရန်သာရှိပါတော့သည် ကျွန်တော်ဆို ဘယ်တော့မှမစားပါ အမြဲလွှင့်ပစ်ပါသည်။ကိုယ်ကိုတိုင် ချက်စားချင်တာစားလို့လည်းရနေသည့်အခြေအနေ ဒီဟင်းပွဲကို ကိုယ်ကကြိုက်မှလည်းစားနိုင်မှာပါ။ ဒါကိုသူဋ္ဌေး မြင်လျှင် ဘယ်တော့မှ လွှင့်မပစ်ခိုင်းပါ ဘယ်လောက်ပဲအေးအေး သူစားပါသည်။ကျွန်တော်သာ သူဋ္ဌေးဆိုစားမည်မဟုတ်ပါ အလုပ်သမားတွေတောင် စားချင်တာချက်စားနေတာကို ကိုယ်မကြိုက်ပဲမစားနိုင်ပါ။
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ အသုံးအစွဲခြွေတာလို့ ချမ်းသာကြတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့လည်းသုံးစွဲကြပါတယ်၊သူတို့ဟာ ရအောင်ရှာနိုင်ပြီးမှ ကောင်းကောင်းစား ကောင်းကောင်းနေ သုံးကြတာပါ။
သူတို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ၀င်ငွေရနေတော့ သူတို့သုံးငွေဟာ သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး ထိခိုက်အောင်လည်းမသုံးကြပါဘူး။
ကျွန်တော်အပါအ၀င် မြန်မာလူငယ်တွေ တော်တော်များများဟာ လဘ္ဖက်ရည် ဆိုင်ထိုင်ရတာ ၀ါသနာပါကြပါတယ် ။အရင်က ကျွန်တော်မနက်ကတည်းက လဘ္ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်လိုက်တာ ထမင်းစားချိန်ရောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုအဖေက လဘ္ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တာမင်းဘာရလည်းမေးရင် ကျွန်တော် ဘာပြန်ဖြေရမလည်းမသိပါ။တစ်ကယ်လည်း ဘာရမှန်းကျွန်တော်မသိပါ။ခပ်တည်တည်နဲ့ပဲ ထမင်းခူးစားလိုက်ပါတယ် ညရောက်တော့ တစ်ခါသူငယ်ချင်းတွေနှင့် လဘ္ဖက်ရည်ဆိုင် ပြန်ထိုင်ပါတယ်။ဘာမှမရပေမယ့် ထိုင်လို့တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်ဘ၀မှာ အများကြီးနောက်ကျခဲရပါတယ်..။
ကျွန်တော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ သူ့သားငယ်လေးကို ဆိုင်မှာ ပန်ကန်သိမ်းခိုင်းပါတယ် စားပွဲခုံသုတ်ခိုင်းပါတယ် ကလေးဟာ ငယ်သေးတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပန်ကန်တွေကျကွဲပါတယ်။ကျွန်တော်က သူဋ္ဌေးကို မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ကွာ မင်းသားငယ်သေးတော့ ပန်ကန်တွေကျကွဲတယ်ကွ..။သူဋ္ဌေးက ကျွန်တော်ကို အဲလစ်(ကျွန်တော်နာမည်) ပန်ကန်တစ်ချပ်ဘာမှ မတန်ပါဘူးကွာ ငါ့သားအလုပ်လုပ်ချင်စိတ် သူ့ရင်ထဲရောက်သွားရင် တစ်နေ့တစ်ချပ် ကျကွဲလည်း တန်ပါတယ်။ကျွန်တော် ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ပါ..။
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာ ရတာနဲ့ရောင်ရဲတတ်တဲ့ အကျင့်လည်းရှိပါတယ်၊ဒီလောက်ရရင်တော်ပါပြီဟာ ...ဒီလောက်ရလည်းမနည်းပါဘူး...ဒီလိုလက်သုံးစကားတွေ အမြဲသုံးတတ်ကြပါတယ်၊အခုဒီလောက်ရရင် ဒီထက်ပိုရအောင် လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး၊ရတာနှင့် ရောင်ရဲနိုင်တာလေးက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေကြည့်ရင် တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ကိစ္စပါ တော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်။ ဥစ္စာစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာတော့မကောင်းပါဘူး ၊ လောဘကြီးဖို့ ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အခုဒီလောက်ရရင် ဒီထက်ပိုရနိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုစဉ်းစာတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စာဖတ်ရင်း ရခဲ့တဲ့စာစုလေးပါ ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါဘူး ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာ မှတ်ထားမိတာလေးပါ။
တစ်ပြားရ တစ်ပြားသုံးလျှင် သာမည ရိုးစင်းသည့် လူ့ဘ၀တည်း။
နှစ်ပြားရ တစ်ပြားသုံးလျှင် အာမခံချက်ရှိသည့် လူ့ဘ၀တည်း။
တစ်ပြားရ နှစ်ပြားသုံးလျှင် အန္တရယ်ကြီးသည့် လူ့ဘ၀တည်း။
အခုလို ဒီပို့စ်လေးကိုရေးလို့ ကျွန်တော်မှာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားမူမရှိပါဘူး ၊ ကျွန်တော်ဟာလည်း ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ပါ ၊ တစ်ကယ်လို့ မင်းရောဘာကောင်လဲလို့မေးလာရင် ကျွန်တော်လည်း ဘာကောင်မှမဟုတ်သေးပါဘူး ဒါပေမယ့် မာတောင်တောင်ကောင် ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေတဲ့လူပါ..။အခွင့်ရလျှင် ကျွန်တော်ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ပိုစ့်အဖြစ်ကြိုးစားရေးပါအုံးမည်။ဒီပိုစ့်လေးသည် ကျွန်တော်ရဲ့ စာရေးညံ့ဖျင်းမူကြောင့် စာဖတ်သူတစ်စုံတစ်ရာ အမြင်လွဲမှာစေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ စာရေးညံ့ဖျင်းမူ ဗဟုသုတ နည်းပါးမူကြောင့် ကျွန်တော်မှာသာ တာဝန်ရှိပါသည်။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 10:47 PM5comments:
ကိုယ့်ရဲ့နာမည်…ရင်ခတ်နွယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် ..။ရင်ကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်တဲ့ နွယ် ပန်းနွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူးနွယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နာကျင်ရတာက အမှန်ပဲလေ ကျွန်တော်ရင်ကိုခတ်သွားတဲ့ နွယ်ပင်တွေမို့ ရင်ခတ်နွယ်လိုခေါ်ပါတယ် ကျောကိုလာခတ်တဲ့ အခါနဲ့ကြုံရင် ကျောခတ်နွယ်လို့ ပြောင်းချင်ပြောင်းခေါ်ချင် ခေါ်ပါ့မယ်။
ကိုယ်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် ......ရင်ခတ်၊ငခတ်...ဘယ်လို့ပဲခေါ်ခေါ်ပါ ကြိုက်သလိုသာခေါ်ပါ ရေခပ်လို့တော့ မခေါ်ပါနဲ့ ဗလမတောင့်လို့ပါ။
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ်..အခုတော့ မလေးရှားမှာ ခဏနေတယ် ၊ လက်တစ်ဖက်နဲ့နှပ်သုပ်ရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဟင်းချက်နေတယ် အဲ့ဒါနဲ့ ဘ၀အတွက် မသေမရှင်စာ လစာလေးရတယ်။
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် ..ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေ နှိပ်ပြီးဆက်...မနှိပ်ချင်ရင် အော်သာခေါ်။
အ၀တ်အစားဆိုရင်...နို့နှစ်ရောင် ဘောင်းဘီတို နှင့်တီရှပ်အဖြူ ။
အစားအစာဆိုရင်….ကောင်းတာဆို အကုန်လာထား..၊ ရှိသေးရင်ထပ်ပေးပါ..။
ပစ္စည်းဆိုရင်.....မီးခြစ်လှလှလေး ဆိုအရမ်းကြိုက် ။
စာရေးစာဆရာ...အားလုံးကိုကြိုက်တယ် ။ကိုယ်ကလွဲရင်...(ကိုယ်ကစားရေးဆရာ ကျနေတာပဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကိုယ်ကလွဲရင်တဲ့)
စာအုပ်…....မရီရရင်တောင် တစ်ခုခုပြုံးစေခဲ့ရင် အကုန်ကြိုက်တယ်။
Life style…အားလုံးကိုခင်တတ်တယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်နေတတ်တယ်၊ကူညီတတ်တယ် ၊ ကိုယ့်ကိုလာကြောရင် ချက်ချင်းတုန့်ပြန်တတ်တယ်၊ အရွဲ့အရမ်းတိုက်တတ်တဲ့ လူတစ်ဦးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ…ဘ၀အမောတွေကို ဟာသနဲ့ ကဗျာအဖြစ်ပြောင်းလဲတာ။
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက....ကျွန်တော်ရဲ့ အဖေပါ။
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက....ကိုယ်အရွဲ့တိုက်သမျှ၊ကိုဆိုးသမျှကို နားလည်မူပေး သီးခံတတ်တဲ့ ကောင်မလေး။
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက ....ဘ၀မှာ အချစ်ကို ပြဇတ်တစ်ပုဒ်လို ခံစားပြီး တိုက်စားရာလမ်းတစိခုအဖြစ် အသုံးချခဲ့တဲ့သူ။
အမှတ်တရနေ့…အသက် ၃၁ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန် ၈.၉.၂၀၀၈ ည ၁၂ နာရီခွဲ ကျွန်တော်မွေးနေ့လေးမှာ ခဏလေးဖုန်းပြောရင်း ဘ၀နှစ်ခု အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ည။
အချစ်ဆိုတာ.....ပျော့လည်းမပျော့ မာလည်းမာမာ ဘာမှန်းလည်းသိဝူး ၊ ဒါပေမယ့် စွမ်းအားတော့ရှိတယ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ....ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်တတ်တဲ့ သဘောပါ ။
ဘ၀ဆိုတာ….ဘ နဲ့စလို့ပါ က နဲ့သာစလို့ က၀ ဆိုရင် ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ချစ်သူဆိုတာ…ကျွန်တော်ကချစ်ပြီး ကျွန်တော်ကိုပြန်ချစ်တဲ့သူ။ (ပြန်မချစ်ရင် မပါဘူးနော်)
ကိုယ့်ရဲ့လက်စွဲဆောင်ပုဒ်က.....ထမင်းစားဖို့မမေ့အောင်နေ။ (ဘ၀မှာ ထမင်းစားဖို့မေ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေ အများကြီးပါ၊ထမင်းငတ်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ အပါအ၀င်ပေါ့။)
ကျွန်တော်ကို ဘယ်သူမှ tag မထားပါဘူး မြစ်ကောက်ရဲ့ open tag ကြောင့် တက်ဖြစ်တာပါ၊တစ်ခါမှလည်း မtag ခဲ့ပါဘူး အခုတက်ပြီနော် ပြန်မဆင်းတော့ဘူး...။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 2:52 PM2comments:
တစ်ခါက စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ထဲရှိတာလေးကိုချရေးထားတာ နောက်မှ ပြန်ဆက်ရေးမယ်ဆိုပြီး ပစ်ထားတာ အခုစာအုပ်အဟောင်းလေးမှာတွေ့လို့ ဆက်ရေးမယ်ဆိုပြီးရေးတာ ဘာမှရေးလို့မရတော့တာနဲ့ ဒါလေးကိုပဲ ဒီအတိုင်းလေးပဲတင်လိုက်တယ်..။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 10:46 PM4comments:
အစိမ်းရောင်သင်္ကေတ နှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ဧဒင်
တေးသွားချိုတွေ သီကုံးတတ်တဲ့ ငှက်ကလေးရှိဖူးတယ်
တစ်ခါက ဧဒင်လို အပြိုင်အဆိုင် ကြီးကျယ်ခဲ့တယ်။
အခုတော့ ရင်ခွင်နှစ်ခုကြား ဆူးတွေခြားပေါ့
တေးဆိုငှက်တွေလည်း အဝေးကိုပြေး လွမ်းတေးသီနေတယ်
ငါရဲ့ ဧဒင်ကို အစိမ်းရောင် မင်းသုပ်ပစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလမ်းကို မင်ရောငါရော ရဲရဲလျောက်ရမယ်
ကော်ဖီခါးတစ်ခွက်လို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ငါသောက်တတ်နေပြီ။
မင်းအတွက် တုန့်ပြန်မူတွေဟာ မလှပနိုင်ခဲ့ရင်
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 4:11 PM 1 comment:
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 1:44 PM No comments:
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ကျေးဇူးရှိတဲ့ သူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောရမှာ အစဉ်အလာတစ်ခုပါ ။နူတ်၏စောင့်မခြင်း နှင့်ဖြစ်စေ၊သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ မိမိအကျိုးကို စောင့်မပေးတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားအရင်ဆုံးပြောပါရစေ ။ကျွန်တော် ရင်ခတ်နွယ်ကို ဘလောဂ့်ဂါဖြစ်လာအောင် ကူညီခဲ့ကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ဘလောဂ့်ဂါဆိုတာ ဘာမှန်းကိုမသိခဲ့ပါဘူး၊ဘလောဂ့်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျတော့ ပိုတောင်ဝေးသွားခဲ့ပါတယ် ။ကဗျာတွေ စာတွေရေးတာ အရင်ကတည်းက ၀ါသနာအခံရှိခဲ့ပေမယ့် ဘလောစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လောက်ထိစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး၊ခံစားရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကဗျာတွေရေးတယ် ပြီးရင်ရေးတဲ့နေရာမှာ ပစ်ထားတတ်တာ ကျွန်တော် အကျင့်ပါ။အားတဲ့အချိန်တွေကျမှ ကဗျာစာရွက်တွေလိုက်ကောက်ပြီး ကလစ်နဲ့ညှပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် "ဒဏ်ရာတွေ အမြဲထမ်းပိုးထားရတဲ့အိတ် "လေးထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအိတ်လေးကို ကျွန်တော် ချစ်စနိုးနဲ့ နာမည်ပေးထားတာပါ ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို အမြဲပဲထမ်းပိုးပေးထားရလို့။
အဲ့ဒီအိတ်လေးက တစ်ခါတစ်ရံမှာ အမှိုက်အိတ်လေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တစ်ခြားသူကြောင့် အမှုိုက်အိတ်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး ဘလောဂ့်ဂါ ဖိုးကြယ်ကြောင့်ပါ။ အလုပ်က ပြန်လာတိုင်း လ္ဘက်ရည် အမြဲပါဆယ် ၀ယ်သောက်တတ်တဲ့ ဖိုးကြယ်ဟာ ကျွန်တော် အိတ်လေးထဲကို သောက်ပြီးသား ဗူးခွံကို အမြဲထည့်ပါတယ်။တစ်နေ့ကြုံတုန်း သူ့ကိုမေးကြည့်ပါတယ်။" ဟေ့ကောင်... ဒီထဲကဘာတွေလည်းလာကြည့်စမ်း" ၊ "ဘာတွေရမှာလည်းဗျ လ္ဘက်ရည်ဗူးတွေပေါ့" ၊တယ်လည်းလာတဲ့ကောင် လ္ဘက်ရည်ဗူးတွေတဲ့ အဲ့ဒါသူပြောမှလား ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့ "မင်းကိုလ္ဘက်ရည်ဗူးပြနေတာမဟုတ်ဘူး" အဲ့ဒီဗူးတွေ ဘယ်ထဲကိုထည့် ထားတာလည်းလို့ ပြနေတာ၊ "ဘယ်ထဲထည့်ရမှာလည်း အမှိုက်အိတ်ထဲကိုထည့်ထားတာပေါ့ဗျ" အမှိုက်မပွအောင်လို့လေ ။ ခေါ်မေးမိတာကိုက ကျွန်တော်အမှား သူ့ကိုတောင် အမှိုက်မပွလို့ ပြန်ကျေးဇူးတင်ရတော့မလို၊ ကျေးဇူးတော့မတင်ပါဘူး နသယ်ရင်းကို ပိတ်တီးချင်စိတ်တော့ ဖြစ်လာပါတယ် ။" အဲ့ဒါအမှိုက်အိတ် မဟုတ်ဘူး " ငါ့ရဲ့ကဗျာစာရွက်တွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်လေး ရာဇ၀င်အိတ်လေးကွ နောက်အမှိုက်မပစ်နဲ့ ...ဟုတ်ကဲ့ ကိုမင်း ကျွန်တော် တစ်ကယ်မသိလို့ပါ နောက်မပစ်တော့ပါဘူး။အခုကျတော့လည်း သူမဟုတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ ချိုသာနေလိုက်တာ တတ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ ငဖိုးကြယ် ...သူလည်းကျေးဇူးရှင်တစ်ပါးပါပဲ ။
တစ်ကယ်တမ်းကျွန်တော် ဘလောဂ့်ဂါတွေနဲ့မစိမ်းခဲ့ပါဘူး ဘလောဂ့်တွေမှာစာလိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။အခန်းထဲမှာလည်း ဘလောဂ့်ဂါနှစ်ယောက်တောင်ရှိနေတာပဲ ညီမလေး အနှင်းလည်းရှိနေတာပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘလောဂ့်ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဘလောဂ့်လုပ်ဖို့လည်းစိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး ကိုယ်ဘာသာကဗျာရေးလိုက် ပစ်ထားလိုက်၊ ချက်တင်ထိုင်လိုက်နဲ့ တော်တော်လေးဟုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘလောဂ့်ဂါ ဖြစ်ဖို့ စတင်အကြောင်းဖန်လာတာက " ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ " ဘလောဂ့်ကနေအကြောင်းစပါတယ်။မခွန်မြလှိုင်က ကိုမင်း အစ်မဘလောဂ့်မှာ ၀ိုင်းကူပေးဖို့ ပြောရာ ကျွန်တော်က တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပါ့မယ်ဆိုပြီး ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် မတွေးမိတာက ဘလောဂ့်မှာ ရေးပြီးသားစာတွေကို ဘယ်လိုထည့် ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူးဆိုတာကို မေ့နေပါတယ်။တော်တော်လေးကို ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ် ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဆရာဘလောဂ့်ဂါတွေကို သွားသတိရမိတာနဲ့ အကူအညီတောင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျုမီငှာ"ဆိုပြီး တရုတ်လိုမအော် ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ၊တော်ကြာ "ဝှေ့စမော့" လို့ ပြန်မေးခဲ့ရင် ကိုယ်ပဲဒုက္ခများမှာလေ သူတို့ကဘလောဂ့်ဂါတွေလေ တရုတ်စကားလည်းတတ်ချင်တတ်နေမှာ၊ဗာမာလိုပဲ သူငယ်ချင်းမြစ်ကောက်ရေ ငါ့ကိုကူညီကြပါဦး ဘလောဂ့်မှာ စာမထည့်တတ်လို့ သင်ပေးပါဦး လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်မိတာကိုက ကိုယ့်အမှား၊ဖြစ်နိုင်ရင် နတ်သမီးတွေအများကြီးရှိတဲ့ နတ်ရေကန်ထဲ ချက်ချင်းခုန်ဆင်းပြီး သေလိုက်ချင်တယ်(အနစ်နာခံလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ပါ)။ဆရာသမားမြစ်ကောက်က ဆီလက်မှတ်ဝေရတဲ့ လမ်းလူကြီးလိုပဲ သူဂွင်ထဲရောက်တာနဲ့ သမိန်ပေါသွပ်လို ညှင်း...ညှင်းလို့ မရီပဲ ကျွန်တော်ကိုစတင်နှိပ်ကွက်ပါတော့တယ်။ချက်တင်မှာ ထိုင်ချင်သလောက်ထိုင် ဇိုပီရာမှာ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေတဲ့ သူကဒီစာလေးတောင် မထည့်တတ်ဘူးလား...?၊ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိသင့်နေပြီ။ချက်တင်နဲ့ဘလောဂ့်ဂင် မသိရင်လည်း ကိုနေဘုန်းလတ်ပေ့စ်မှာ စာလေးဘာလေးသွားဖတ်သင့်တယ် အစချီကာ ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွဲလိုပဲ မပြီးနိုင်အောင် အမုန်းနှိပ်ကွက်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်မှာလည်း ဆီတန်းဆီရတဲ့သူတွေလိုပဲ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ဆက်ပြီးသီးခံနေရပါတယ် လက်မှတ်ရရင် ပြန်ရောင်းစားမလို့ပေါ့။
ကိုယ်ကသိချင်နေတာကို သီးခံရတာပေါ့ ပြောချင်တာသာပြောပေတော့ ငမြစ်ရေ၊ ကိုယ်ကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတော့ ခံနေရတာပေါ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒန်ကော ဒေါကန်ပြီး နဲနဲတော့နှာကစ်သွားတယ်၊ ဆရာသမား မြစ်ကောက်က သူကိုတိုင်နှိပ်ကွက်လို့ အားမရသေးဘူး၊ လမ်းလူကြီးဦးနှောက်နဲ့ ရိုက်စားလုပ်ပြီး ကျွန်တော်အကြောင်းကို " ဆေးတိုက်တဲ့သူ " ပို့စ်အဖြစ်ဘလောဂ့်မှာတင်ပြီး ရအောင်လုပ်စားသွားသေးတယ်။ကျွန်တော်လည်း မဖြစ်တော့ဘူး ဒီနှစ်ကောင် (ဖိုးကြယ်၊မြစ်ကောက်)ကြားမှာနေရင် ပရုတ်လုံးလိုလုံးပါးပါးရင်ပါး မပါးရင် အမှိုက်အိတ်တော့ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး။ဘလောဂ့်လုပ်တတ်အောင် မေးရစမ်းရပါတော့တယ် ၊ အစ်မခွန်မြလှိုင် ကိုအပူကပ်ရပါတော့တယ် ၊ အစ်မရေ အစ်မမောင်မြစ်ကောက်က ကျွန်တော် ဘလောဂ့်မှာ စာမထည့်တတ်တာကို ကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်ကွက်နေတယ် လို့တိုင်ပြောပြီး ၊ကျွန်တော် လည်းဘလောဂ့်တစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ် ကူညီပါဦးအစ်မရယ် ဆိုပြီးအစ်ကူညီတောင်ခဲ့ပါတယ်၊သဘောကောင်းတဲ့ အစ်မခွန်မြလှိုင်က မခံနဲ့ကိုမင်းရေ ပြန်ပြောလိုက် ချက်တင်ထိုင်တတ်တာနဲ့ ဘလောဂ့်လုပ်တတ်ရမှာလား ချက်တင်ကချက်တင် ဘလောဂ့်က ဘလောဂ့် မဆိုင်ဘူးတဲ့ အစ်မလုပ်ပေးမယ် ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လည်း ပြောနာရီဝက်အတွင်း ပြီးရမယ်။အဲ့လိုကြတော့လည်း ကျွန်တော်ကမလိုချင်တော့ဘူး ကိုိုတိုင်လုပ်တတ်ချင်တာလေ၊ဒါကိုလည်း အစ်မကစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ သင်ပြပေးပါတယ်။ဘလောဂ့်လုပ်နည်းတွေ တင်ထားတဲ့ ဘလောဂ့်လင့်တွေကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် လုပ်တတ်သလိုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဘလောဂ့်ဟာလည်း အခုထိပုံစံမကျသေးပါဘူး။
ပုံစံမကျတဲ့ ကျွန်တော်ဘလောဂ့်ကိုလာလည်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘလောဂ့်ကို ပထမဆုံးလာလည်တဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ ကိုတည်ငြိမ်းကိုို ကိုယ်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကို သင်ပြပေးရင်း ဘလောဂ့်ဂါ လမ်းကြောင်းပေါ် စတင်ပေးခဲ့တဲ့ အစ်မခွန်မြလှိုင် (သို့) ညီမခွန်မြလှိုင် ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူလည်ကျပြီး အစ်မလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး အရင်ကတည်းက လေးစားရင်းအစ်မလို့ခေါ်နေရာကနေ ကိုယ့်ထက် ငယ်မှန်းသိရတော့လည်း ပြင်မရတော့ပါဘူး၊နူတ်ကျိုးခဲ့ပါပြီ အစ်မလို့ပဲ ဆက်ခေါ်တော့မယ်။
စပယ်ရှယ် ကျေးဇူး တင်ရမယ့် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း (သို့) ညီလေး မြစ်ကောက် ၊ဆန်ရင်းနာနာဖွပ်ပေးရင်း ကျွန်တော် မသိတာ မတတ်တာတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ သင်ပေးခဲ့တယ်၊မြန်မာစာ လက်ကွက်ရိုက်တာကအစ မှားတာရှိရင်အားလုံး သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ ညီလေးမြစ်ကောက်ကို လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘလောဂ့်ဂါ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မတွေအားလုံး နှင့် သူငယ်ချင်းအားလုံး၊သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ ၊ကြားဆရာ၊အားလုံးကို ဒီပို့စ်လေးနှင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 6:44 PM No comments:
တိတ်တိတ်လေးပဲ ချစ်နေရတော့မှာလား.. ?
ဘာသာပြန်ဖို့ မင်းခက်ခဲလိမ့်မယ် ...။
ဆွတ်ယူဖို့ခဲ့ယဉ်းလှတဲ့ပန်းမို့
လေသင့်ရာပျံဝဲဖို့ မင်းခက်ခဲလိမ့်မယ် ...။
အချစ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ဖို့ မင်းခက်ခဲလိမ့်မယ် ...။
သက်မ နဲ့ ရှိုက်မက်ပြင်းရင်း
ဘ၀တွေ တူရှင်ပျော်ဖို့ မင်းခက်ခဲလိမ့်မယ် ...။ ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 10:47 PM No comments:
မနက်ဖြန်သာ ဖြစ်ပါစေတော့ ........။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 11:09 PM No comments:
ငါကိုယ်တိုင် အဖြေရှာမရတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်မှာ
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 1:07 AM No comments:
အမေပေးတဲ့အသက်နို့ချိုတစ်စက်နဲ့
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 3:25 PM No comments:
ဒီနေ့လေးမှာ ငါအရမ်းပျော်ရွှင်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေမယ်ထင်တယ်...။
မင်းအတွက် အလှဆုံးနှင်းဆီပန်းလေ တစ်ပွင့်ရယ် ချောကလက်တစ်ခုရယ် ပို့စကတ်လှလှလေးတစ်ခုလောက် ငါဖန်တီးမိနေမှာအမှန်ပဲ......,
မင်းကိုပြောမယ့် စကားလေးတွေကိုလည်း ငါတစ်ညလုံးစဉ်းစားထားမှာပေါ့....။
ဒီချစ်သူများနေ့မှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး ဂန္တ၀န်ဆန်တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ မင်းနဲ့ငါအတူထိုင်ရင်း မင်းကိုငါဘယ်လောက်ထိချစ်တာ ကိုပြောရင်ကောင်းမလား... ဒါမမဟုတ် ငါတို့ဘ၀နှစ်ခုရှေ့ရေးတွေ တိုင်ပင်နေရင်ကောင်းမလား..?
မင်းနဲ့ငါ စပြီးချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေရယ် အတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ နေ့တွေကို ပြန်ပြောနေ၇င်ကောင်းမလား...? မေးခွန်းများစွာနဲ့ပေါ့ ငါအလုပ်တွေရှုပ်နေမယ်ထင်တယ်....
ချစ်သူ....သူငယ်ချင်းတွေက ငါ့ကို "ချစ်သူများနေ့ "မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေတဲံ့ ...ဆုမွန်တွေပေးနေကြတယ်.....,
ငါအရမ်းပျော်တယ်လို့ ပြန်ပြော၇င်ကောင်းမလာ .....?ငါဘယ်လိုပြန်ဖြေရမှာလည်ချစ်သူ.....?
အခုတော့လည်း ချစ်သူများနေ့ဟာ ငါနှင့်မဆိုင်သလိုပါပဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေး ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်အဟောင်းတွေပြန်လှန်ရင်း ငါကြိုက်လို့သိမ်းထားတဲ့ အမည်မသိရေးထားတဲ့ ဘာသာပြန်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်..,
ငါအကြိမ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်မိနေတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်မဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်ရယ် ဒီနေ့လေးအတွက်ရယ် အမှတ်တရ ပိုစ့်အဖြစ်တင်ထားလိုက်တယ်.....။
မချစ်နဲ့ ငါ့ကို ရုပ်ချောလို့
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 9:09 PM No comments:
ဆောင်းခိုငှက် သို့အလွမ်း
မင်းပြန်လာမယ့်နေ့ကိုစောင့် မျှော်မိတယ် . . . ။
အတွယ်တာမဲ့ငါ့ ရင်ခွင်မှာ
မင်းခိုဝင်နားခဲ့ တာ ဆောင်းတွင်းလေးတစ်ခုပါ
ဒဏ်ရာမဲ့ဝေဒနာတွေဟာ
ငါ့ ရင်ခွင်မှာ အပြည့်ပါ ။
ငါ့ ရင်ခွင် ခိုဝင်နားတဲ့ မင်းကို
မြူမှုန်တစ်မှုန် ၊ နှင်းသွေးတစ်စက် မသက်ရအောင်
ငါ့ ရင်ကိုကော ခေါင်းကိုမော့ လို့ 
နွေးထွေးမှု အတောင်ပံတွေနဲ့ 
ဖြန့် ကျက်ကာစီးထားခဲ့ တယ် ။
ဆောင်းကန့် လန့် ကာပိတ် နှင်းတွေတိတ်တော့ 
ထွက်သွားလိုက်တာ . . .
နွေးထွေးခဲ့ တဲ့ရင်ခုန်သံတွေ
မင်းအတွက်ပဲ ရှိခဲ့ ဖူးတာ
မင်း . . .
မသိခဲ့ လေလျှော့ လား . . .
လေဟုန်ကိုခွဲ ၊ အတောင်ကို ၀ဲလို့ 
ပျော်ရွင်စွာ ပျံထွက်သွားခဲ့ တာ
နှုတ်ဆက်တေး တစ်ပွင့် တောင်
ငါ့ အတွက် ခြွေမချခဲ့ ဘူး . . . ။
အတွယ်တာမဲ့ငါ့ ရင်ခွင်
သံယောဇဉ် ဗလပွနဲ့နာကျင်ခဲ့ ရတာတောင်
ဒဏ်ရာကိုဖက် ကျေနပ်လျှက်ငါ . . .
ပြုံးခဲ့ မိသေးတယ် ။
တောက် . . . !
အမှတ်မရှိတဲ့ဒီကောင်
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာမယ့် လမ်းမှာ
ရင်ကိုကော့ခေါင်းကိုမော့ လို့ 
စောင့် နေမိသေးတယ် . . .။ ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 1:35 AM 1 comment:
မင်းအတွက်ပါဘဲ ချစ်သူ ....။
မောင်းရင်းမှာ တွဲခို ချွဲနွဲ့လိုလည်း
ဂုဏ်သိက္ခာ ဆိုတဲ့ တံတိုင်းတစ်ခုအတွက်
အညတြ မို့ မဟာသွေး မပါဘူး ချစ်သူ ....။
နေရောင်မကျ ၊ မိုးစက်မယို
ထရံကာ ဓနိမိုး ကျုရိုးခြံတိုင်က
ဘ၀ရဲ့ ဟော်နန်းတစ်ခုပါ ချစ်သူ ....။
ရွှေလင်ပန်း ဆိုတာ အချင်းဆေးစရာလို့
ဘာသားနဲ့ ထုထု လူသားဆန်ဆန်
တခါတရံတော့ စိတ်လျှော့ချင်တယ် ချစ်သူ .... ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 1:26 AM No comments:
၀တုတ်မလေးရေ . .
Hi . . . ဆိုပြီး ၊ ငါရဲ့နှလုံးသားမှာ နင်ခြေရာလာချတဲ့ နေ့ ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက နင်ဟာ ငါ့ နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်သွားမယ့်သူမှန်း ငါတစ်ကယ်ကို မသိခဲ့ ပါဘူး ။နင်ရော ကြိုတင်ပြီး သိနေခဲ့ လေသလား ? တကယ်လို့ သာ နင်ကသာ ကြိုသိများသိနေခဲ့ ရင်. .
ငါ . . . စသိခဲ့ တုန်းက နင်ဟာ ကောင်မလေးတွေထဲက သာမန်ကောင်မလေး တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပေါ့။ နောက်မှ ငါသိခွင့် ရခဲ့ တာ နင်က ကောင်မလေးတွေထဲက ၀တုတ်တုတ် ၊ ပေကပ်ကပ်၊ ဂျစ်ကန်ကန် နဲ့ငါ့ ကို အနိုင်ယူမဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ မှန်း ငါသိခဲ့ ရတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျခဲ့ ပြီဟာ . . . ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော ငါဘက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့ ခင် နှလုံးသားက မင်းကို လေးလေးနက်နက်နဲ့ထာဝရတစ်နေရာစာ ပေးခဲ့ မိလို့ ပဲ ။နင်နဲ့ ငါ စကားပြောဖို့ချိန်းထားပြီး အခက်ခဲ တစ်ခုကြောင့်ငါ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ ငါရောက်မလာလို့ ၊ နင်ငါ့ ကို မျှော်နေတယ်လို့ငါသိခွင့်ရခဲ့တယ် မထင်မှတ်ပဲ အံ့ သြခဲ့ ရတယ် ။ အဲဒီအတွက်လည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ ရတယ် ။ ဘာကိုမှ အလေးအနက် မထားတတ်တဲ့ငါလေ ဒီနေ့ လေးကို ဒိုင်ယာရီမှာ ရေးမှတ်ထားသလို ငါ့ စိတ်ထဲမှာလည်း စွဲထင်နေအောင်ကို မှတ်ထားကာ နောင်ကို ဒီလိုမျိုး မဖြစ်စေရဘူး . . . လို့ ။ ဒါ ဆို ဒီနေ့ လေးအတွက် နင်ငါ့ ကို ကျေနပ်နိုင်မှာပါ ။၃.၅.၂၀၀၇ . . . . ဒီနေ့ လေးကို နင်မှတ်မိနိုင်ပါဦးမှာလား ? မင်းရဲ့ ရိုးသားပွင့် လင်းတဲ့ မေးခွန်းကြောင့်ဂယောင်ချောက်ခြားနဲ့ ပုံစံမကျတဲ့ရည်းစားစကားနဲ့ငါနင့် ကို ချစ်ခွင့် ပန်တဲ့နေ့ လေးပေါ့။ တစ်နေ့တစ်ခြား နင့်အပေါ်မှာ ငါ့ ရဲ့ အချစ်စိတ်တွေပိုများလာခဲ့ တယ် ။ မြိုသိပ်ရလွန်းလို့ လဲ ငါ့ ရင်တွေ မွန်းကျပ်နေတယ် ။ တစ်ကယ်တန်း ကျတော့ငါဖွင့် မပြောရဲခဲ့ ဘူးကွာ .။ ဖွင့် မပြောရဲဘူး ဆိုတာထက် ဖွင့် မပြောရက်ခဲ့ တာပါ ၀တုတ်မလေးရေ . . . ။ငါ့ ဘ၀ ငါ့ အခြေအနေကို ငါအသိဆုံးပါ ။ ငါကိုယ်တိုင် ပျော်ရွင်နေရတဲ့ငါ့ ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိမ်မက်လေးကို ငါ . . . မဆုံးရှုံး ချင်ဘူး ။ အဲဒီအိမ်မက်လေးထဲမှာဘဲ နင့် ကိုငါ ချစ်နေချင်တာ ။ နင်မသိနိုင်တာ ကလွဲရင် ငါ့ အိမ်မက်ကလေး ပျောက်ဆုံးသွားမှာမှ မဟုတ်တာ . . . ။ နင်ကတော့ငါ့ ကို အမြဲတမ်း အားပေးပါတယ် . . . ချစ်တဲ့ သူရှိတာပဲ ကိုကစပြီး ဖွင့် ပြောလိုက်ပါလားတဲ့။ ဒါမှ ရင်ထဲမှာ ပေါ့ ပါးသွားမှာပေါ့ တဲ့။ မထင်မှတ်ပဲ နင် ငါ့ ကို မေးခွန်းလေးတစ်ခု မေးလာတယ်နော် . . . ငါ ချစ်တာ ဘယ်ကောင်မလေးလဲ ? တဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပွင့် ပွင့်လင်းလင်း ပြောရအောင်တဲ့။ နင် ငါ့ကိုခင်ရင် အခုပြောကို ပြောရမယ်တဲ့။ မပြောရင် ငါနင့် ကို မခင်တော့ ဘူးတဲ့။ ငါဘယ်လို ပြောပြရမလဲ ၀တုတ်မလေးရေ . . . ။ ငါကြံရာမရတဲ့အဆုံး နင့် ကိုငါချစ်နေတာပါလို့ပြောမိခဲ့ တယ် ။ ဘယ်လောက် အံ့ သြစရာကောင်းခဲ့သလဲ နင်ကတော့ငါ့ ကို ရယ်ကျဲကျဲနဲ့အခုနင့် ရင်ထဲမှာ ပေါ ပါးသွားပြီ မဟုတ်လားတဲ့။ နင့် ရင်ထဲမှာ ပေါ့ သွားအောင် ငါ လုပ်ပေး လိုက်တာတဲ့။ ဘယ်လောက်ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်သလဲ ... နင် ငါ့ ကို နားလည်ပေးခဲ့ တယ်နော် ။ တကယ်ပါပဲ အခု ငါ့ ရင်ထဲမှာ ပေါ့ ပါးသွားခဲ့ ပြီလေ . . ၂၅.၅.၂၀၀၇ . . . . ၀တုတ်မလေးရေ . . ဒီနေ့ လေးကို ငါ့ ဘ၀မှာ ဘယ်တော့ မှ မေ့ မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ငါ့မွေးတဲ့ နေ့ တောင်မှ ငါ မေ့ ရင်မေ့ နိုင်လိမ့် မယ် ။ နင်ငါ့ ကို ချစ်တယ်လို့အဖြေပေးခဲ့ တဲ့ဒီနေ့လေးကို ငါအမြဲတမ်း သတိရနေမှာပါကွာ ။
အခုဆို ငါ့ ဘေးမှာ ငါ့ ကို နားလည်ပေးမယ့်၊ အားပေးစကားတွေ ပြောပေးမယ့်တီးတိုးတိုင်ပင်ဖေါ် ၀တုတ်မလေးတစ်ယောက် ရှိနေပြီပေါ့ ကွာ ။ ဂျစ်ကန်ကန် ၊ ပေကတ်ကတ် နိုင်တာကလွဲရင် ငါ့ရဲ့ဘ၀အမောတွေ ကြားထဲဝင်လာရဲတဲ့နင့်ကို ကျေးဇူးပါပဲ ၀တုတ်မလေးရေ . . . ။အရင်ကဆို ၀၀တုတ်တုတ် ကောင်မလေးတွေမြင်ရင် ပြုံးစိစိ နဲ့သဘောကျတတ်တဲ့ငါ . . . ၊ အခုဆိုရင် ၀တုတ်တုတ် ကောင်မလေးတွေကို တွေ့ ရင် နင်ဖြစ်နေမလားလို့လိုက်ကြည့်ပြီး ၊ စိတ်ကူးယဉ် အပြုံးလှလှလေးတွေကို ငါဖန်တီးနေတတ်ခဲ့ ပြီဟာ ။ ဒါတွေဟာ မင်းကြောင့် ပေါ့ဝတုတ်မလေးရေ ။ ကျေးဇူးလည်း တင်တယ် ၊ အမြင်လဲ ကတ်ချင်တယ် ငါ့ ကို နိုင်စားလွန်းတဲ့နင့် ရဲ့ စိတ်ကိုပေါ့။
နင့် အတွက် အမှတ်တရရယ်လို့လုပ်ပေးခဲ့ တဲ့ငါမြတ်နိုးတဲ့အရာတွေ တော်တော်များများကို နင်အမြဲဖျက်တတ်တယ်နော် ။ ငါ့ကို နာကျင်အောင်လုပ်နေတာလား ၀တုတ်မလေးရေ . . . နင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေး တစ်ခုတောင် ငါ ခံစားတတ်လွန်းတာ နင်မသိရော့လေသလား ?သိရဲ့သားနဲ့ငါ့ ကို နာကျင်စေချင်လို့ လား ? ဒါမှ မဟုတ် နင် အမြဲပြောပြောနေတဲ့ငါကိုချစ်တယ်ဆိုတာကို ပြနေတာလား ? မေးခွန်းတွေကို မေ့ ထားရင်း နင့်ကို ပိုချစ်နေနိုင်အောင်ပဲ ငါ ကြိုးစားခဲ့ တယ်လေ . . . ။ ၀တုတ်မလေးရေ . . တစ်ခါတစ်လေ နင်ငါ့ ကို စိတ်ဆိုးရင် နင်အမြဲပြောတတ်တဲ့ချစ်သူဘ၀ ခိုင်မြဲဖို့ ဆိုတာ ချစ်နေရုံနဲ့မပြီးဘူး ။ ယုံကြည်မှု နားလည်ပေးမှုတွေလည်း လိုအပ်တယ်လို့နင်ငါ့ ကို ပြောခဲ့ တယ်နော် ။ နင်ရဲ့အရှေ့ မှာ ငါ မမေး.ရက်ခဲ့ တဲ့မေးခွန်းလေး တစ်ခုကို အခုငါ နင့် ကိုမေးကြည့်ချင်တယ် ။ နင်မေးခဲ့ တဲ့မေးခွန်းလေး အတွက်ပါပဲ . . .
နင်ငါနဲ့စကားတွေ ပြောနေရရင် အရမ်းပျော်တာပဲလို့ငါ့ ကိုနင် ပြောခဲ့ ဘူးတယ်နော် ။ နင့် ကို ပျော်ရွင်စေချင်တဲ့ငါဟာ . . . ငါကိုယ်တိုင်လည်း နင်နဲ့စကားတွေပြောနေရရင် အရမ်းပျော်တာပဲ လို့နင့် ကိုပြန်ဖြေရင်း တိတ်တခိုးနာကျင်ခဲ့ရတယ် ။ ငါ့ ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်း စိုးထိတ်ခဲ့ မိတယ် ။
ငါနဲ့စကားပြောရတာ နင်ပျော်လို့ များ ငါ့ ကို ချစ်ခဲ့ တာလား ? ၀တုတ်မလေးရေ . . အဲဒီလို မဖြစ်ပါရစေနဲ့ လို့ငါဆုတောင်းနေမိတယ် ။ ဒီလိုဆို ငါ့ ကို မချစ်ပါနဲ့ဝတုတ်မလေးရေ . . . နင်ပျော်မယ်မယ်ဆိုရင် နင်ပြန်မချစ်လည်း နင်ပျော်ရွင်ဖို့. . . နင့် ကိုနေ့ တိုင်း ၊ နေ့ တိုင်း ငါ စကားတွေလာပြောပေးမှာပေါ့။ ငါလေပေးဆပ်နိုင်သမျှထဲက အားလုံးပေး ဆပ်ပြီး နင့် ကိုချစ်နေချင်တဲ့သူပါ ။
တစ်ခါတစ်လေ နင်ငါ့ကို စိတ်ဆိုးပြီး အရွဲ့ တိုက်တာ ၊ ဂျစ်ကန်ကန် လုပ်တာလေးတွေက နင်ငါ့ ကို တန်ဖိုးမထားသလို မျိုး ခံစားရရင် ငါထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကြားက ငါ့ မာနတွေ ပေါက်ကွဲခဲ့ ရတယ် ။ အဲဒီ မာန အပိုင်းအစလေး တစ်ခု နင့် ကို သွားမှန်လို့နင်နာကြင်ခံစား ရရင် ငါ့ကိုယ်ငါလည်း နာကျည်းခဲ့ ရတယ် ။ အဲဒီညက ငါ့ကိုယ်ငါ ဒဏ်ခတ်တဲ့ ညပေါ့။ ( ဟန်နီကယ် ဘီယာ (၃) ဗူး + အာလူးကြော် နဲ့ ပေါ့) ငါအတွေးထဲမှာ စီးမျှောရင်း ငါ့ ကိုယ်ငါ ဒဏ်ခတ် နေမိတယ် ။နင်အမြဲ ပြောခဲ့ တဲ့ ငါနဲ့ အတူနေရင် ငါကြိုက်တတ်တဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ကို နင်ကိုယ်တိုင် ချက်ကျွေးမယ် ဆိုတဲ့နင့်ရဲ့စကားသံ ၀ဲဝဲလေးကို ငါလွမ်းတတ်နေပြီဟာ ။ နင့် ရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံး ဟင်းချက်နည်းထဲက ကြက်ဥကြော် နဲ့ကြက်ဥပြုတ် ကိုလည်း ငါတောင်းတနေမိတယ် ။ နင့် ရဲ့ငြုတ်သီးထောင်း စပ်စပ်လေးကို ငါမကြိုက်ပေမယ့်. . . နင် သာငါ နဲ့အတူရှိနေခဲ့ မယ်ဆိုရင် ငါ စားနိုင်ပါတယ် ။နင်ဟာ.....ငါ့ရဲ့ဘ၀ပါ...။နင့် ကြောင့် ပေါ့ဝတုတ်မလေးရေ . . .
တရုတ်သီချင်းတွေကို မကြိုက်တတ်တဲ့ ငါ . . . အခုဆို နင်ကြိုက်တတ်တဲ့တရုတ်သီချင်းတွေကို မြတ်နိုးတတ်လာသလို ၊ J.J Line ဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်း ရင်းနှီးလာတယ် ။ DAOLANG ရဲ့သီချင်းတွေကိုလည်း ငါခံစားတတ်နေပြီဟာ ။ နင်ပေးထားတဲ့ဝေါ်ရှန်းနေ(နီ) / I Miss You ဆိုတဲ့တရုတ်သီချင်းလေး က ငါ့ ရဲ့အသဲစွဲ ပေါ့။ နင်မကြိုက်တတ်တဲ့Hip Hop သီချင်းတွေ ကိုတောင် ငါနားမထောင်ဖြစ်တော့ တဲ့ အထိပေါ့။ နင်နဲ့ အတူ တစ်ဖက်ထဲမှာ အမြဲတမ်း အတူရှိနေချင်တဲ့ ငါလေ နင်စီးတတ်တဲ့အနီရောင် ကတ္တီပါ ဖိနပ်လေးကိုတောင် လိုက်စီးဖို့ငါ စဉ်းစားမိတယ် ။ ( တို့ကို ရာဇာလို့ပါတ်ဝန်းကျင်က မပြောရင် ပေါ့ လေ . . . )
နင်နဲ့ ငါ ချစ်သူဘ၀မှာ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကို မရောက်ဘူးသေးသလို ၊ ကန်တော်မင်္ဂလာ ပန်းခြံကိုလည်း မရောကဖူးသေးဘူးဟာ ။ သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံမှာလည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ဆိုတာလည်း ဝေးပေါ့။ သူများတွေလို K.L.C.C အမွှာညီနောင် မျှော်စင်ရဲ့ STARBUFF ကော်ဖီဆိုင်မှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို (ပိုက်ဆံ မလောက်၍ ) နှစ်ယောက် အတူ သောက်ရင်း သင်းပျံ့ တဲ့ကိုယ်သင်းနဲ့လေးလည်း ငါ မဖလှယ်ခဲ့ ဘူးပါဘူး ။ ကိုယ်တို့ သာ အဲဒီလိုမျိုး အခွင့် အရေးရခဲ့ ရင် ပိုက်ဆံမလောက်မယ့်အတူတူ နေကြာစေ့တစ်ထုပ်နဲ့၊ ရေသန့် ဘူး တစ်ဘူး ၀ယ်ပြီး . . . K.L.C.C ပန်းခြံထဲ က ရေပန်းလေးနားမှာ ထိုင်ရင်း နင့် ကို နေကြာစေ့ခွံကြွေးမှာပေါ့. . . ၀တုတ်မလေးရယ် ။ အဲဒါမှ ပိုပြီး Romantics ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ ။ နင်ငါ့ ကို ခွင့် ပြုမယ်ဆိုရင် နင့် လက်ကလေးကို နွေးနွေးထွေးထွေး ဆုပ်ကိုင်ထားမှာပေါ့. . . ၀တုတ်မလေးရေ . . . ။ ( coffee သောက်တတ်ရုံ သက်သက်နဲ့K.L.C.C ကို လျှောက်ပါတ်နေတဲ့မြစ်ကောက် ကို ချောက်ချနေခြင်း မဟုတ်ပါ . . . )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တုတ်မလေးရေ ...ငါ့ ရဲ့ အနာဂတ်နေ့ တွေထဲမှာ ငါ . . . ဟာ လဲပြိုလိုက် ၊ ပြန်ထလိုက်နဲ့သက္ကရာဇ် တွေကို တစ်ခုစီ ဖဲ့ စားရင်း နင်နဲ့ပြန်ဆုံမယ့်နေ့ ကို မျှော်လင့် မိတယ် ။ ငါမျှော်လင့် မိပေမယ့်အားတင်းပြန်လာရမယ့်နင့်ရင်ခွင် ငါ့ အတွက် ခြောက်သွေ့ နေမှာ ကိုတော့ ငါ ကြောက်တယ် . . . ။
မာယာကြွယ်တဲ့လောကကြီးမှာ သစ္စာကို ရင်မှာတည်ပြီး ၊ မာယာမပါတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ငါပြောချင်တယ်ဝတုတ်မလေးရေ...ငါ့ ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်သက်တွေအထိ မပြောင်းလဲတဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့နင့် ကိုငါ အမြဲတမ်းချစ်နေမယ် ။နှလုံးသားပြတိုက်ထဲက ဂျစ်ကန်ကန် ၀တုတ်မလေးတစ်ယောက် ပါပဲ ... ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 12:54 AM No comments:
ကဗျာကိုကျိုးစေခဲ့တာ မင်းကြောင့်။ ။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 2:29 PM No comments:
နှလုံးသားပြတိုက်ထဲက ဂျစ်ကန်ကန် ၀တုတ်မလေးတစ်ယောက်ရဲ...